New ihlangabezana #hst ubudala #GWR #greatwesternrailway #newtrains
Iposi olwabiwa Nigel C Williamson (@ nigelw68) ku uJan 22, 2018 ngesikhathi 3:24am PST
Lapho eqhathanisa motor ezokuthutha nge wesitimela, izindleko yangaphandle, umsindo, ukungcoliswa komoya, izingozi, nengqalasizinda ukuwohloka, nokucinana aphansi kuze ku izitimela kuka usebenzisa imoto yangasese.
ongcolile nomsindo yiyona nomthelela omubi umsindo kukho kokubili abantu nezilwane. Kuyinto, umphumela walo oqondile abampofu ukuhlela zasemadolobheni. Izinkinga kusuka ongcolile nomsindo usuku wabuyela eRoma lasendulo! Namuhla, ongcolile nomsindo kusuka izimoto kungabangela ukulimala isimo abantu ngokwengqondo. Izimpawu zihlanganisa umfutho ophakeme wegazi, amazinga aphezulu-ukucindezeleka, tinnitus, ukuphazamiseka kokulala, neminye imiphumela eyingozi.
Kukhona umehluko phakathi diesel izitimela kagesi izitimela. izitimela kagesi ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana 20-35% carbon esingaphansi isitimela udizili. A isitimela imvelo izitimela Electric ikakhulukazi ukuthi anikwe amandla ophinde uvuseleleke futhi sipho kulolu hambo carbon-free. Emissions ezivela izitimela eYurophu kuzonciphisa ngumuntu okwengeziwe 50% ngu 2030. Lezi zibalo ezinkulu kusukela akhawunti izitimela ngoba 8.5% ka wonke umsebenzi travel.
Iposi olwabiwa Dave Wheeler (@davewheelerstudio) ku Juni 23, 2016 ngesikhathi 3:18pm PDT
Ezinye izinto ezithakazelisayo lapho Ngokuqhathanisa izitimela ukuba izindiza wukuthi izindiza kudingeke usebenzise Kusaphazwa fuel kokubili ukusuka kanye kokwehla. Futhi, lapho abantu ukuhamba ngendiza, ithambekele ukuya esikhumulweni sezindiza ngemoto. Lokhu kunezela amagesi CO2 lwendlela. Lokhu kwenza kuthatha kwamadolobha isitimela akukho-brainer imvelo.
Sekuke kwaba khona intuthuko eyenzekile muva, ikakhulukazi kubantu ukuhamba ibhizinisi ngubani zisuselwe bezohambo we-carbon umthelela izindiza zabo. Futhi, ngaphandle imvelo, kunzima kakhulu ukufinyelela izikhungo edolobheni ngemoto, kuyilapho, uma esitimeleni, une ukufinyelela ngqo izikhungo wedolobha. Lokhu, ezikhathini eziningi, kuphinde kusho ukuthi isheshe ngihambe ngesitimela kunanoma iyiphi enye indlela.
Ekuphetheni, isitimela kahle imvelo kanye kakhulu indlela imvelo-friendly ukuhamba futhi ahlinzeke lula ngabantu ukuhamba kokubili ibhizinisi kanye ubumnandi. Ukwanda izimoto emgwaqweni kusho ukuthi ukuminyana nokungcoliswa kukhona udlondlobala nezitimela kukhona impendulo ezokuthutha ukuvikela imvelo.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/why-choosing-to-travel-by-train-is-environmentally-friendly/ - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)